राती ३ बजे उठेर आमालाई के भनेछन् सि’द्धार्थले ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियराती ३ बजे उठेर आमालाई के भनेछन् सि’द्धार्थले ?
राती ३ बजे उठेर आमालाई के भनेछन् सि’द्धार्थले ?
बलिउडका चर्चित अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाको बिहीबार हृ’दयघा’तका कारण नि’धन भएको छ। वास्तवमा, सिद्धार्थ शुक्लाले बुधवार राती सु’त्नु अघि केही औ’ष’धि खाएका थिए, तर भोलिपल्ट बिहान उनी उठ्न सकेनन्।
उनलाई अस्पताल लगिएपछि अभिनेताको मृ’त्यु भएको पुष्टि भयो। मृ’त्यु पछि, सिद्धार्थ शुक्लाको पो’स्ट’मा’र्ट’म गरियो, जसको पछि आज (शुक्रवार) अन्तिम सं’स्कार गरिनेछ। प्रहरीका अनुसार सि’द्धार्थ बिहीबार बिहान ३।३० बजे उठे। अभिनेताले आफ्नी आमालाई भने आमा मेरो छाती र टाउको दु’खेको छ ।
आमाले उनलाई पानी दिइन् र आराम गर्न भनिन् । भोलिपल्ट बिहान अभिनेताकी आमा रीताले उनलाई उठाउने प्रयास गरीन् तर उनी सफल हुन सकिनन्। आमाले छोरीलाई बो’लाइन् । छोरी र ज्वाईले सिद्धार्थलाई मुम्बईको कू’पर अस्पताल लगे, जहाँ उनलाई डाक्टरहरुले मृ’त घो’षित गरे।
ए’म्बुलेन्समा, सि’द्धार्थ बिहान ९ ४० मा कूपर अस्पताल ल्या’इयो। यस समयमा, दिदी, भि’नाजु, नातेदार भाई र तीन साथीहरु उनी संग थिए। लगभग १०।१५ मा डाक्टरले उनलाई मृ’त घोषित गरे।
थप समाचार – सेप्टेम्बर २ मनोरञ्जन उद्योगको लागी एक कालो दिन भन्दा कम छैन। टिभी को प्र’तिभाशाली, सुन्दर र फिटनेस सिद्धार्थ शुक्लाको नि’धनले बलिउड शो’कमा छ । सिद्धार्थ गुमाउँदा भएको क्षतीपूर्ति कसैले गर्न नसक्ने बलिउड कलाकारहरुले भनेका छन् ।
यो पी’डा सहन सिद्धार्थको परिवार र प्रियजनहरुको लागी धेरै क’ठिन छ। सिद्धार्थ शुक्लाका प्रशिक्षकले भारतीय मिडियासंग गरेको कुराकानीमा अभिनेताकी आमा र उनका साथी शहनाज गिलको अवस्था निकै दुखद् छ । शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्लाको घरमा सिद्धार्थकी आमासँग छन्।
दुबैको हालत धेरै खराब छ। सिद्धार्थको प्रशिक्षक सिद्धार्थकी आमालाई सान्त्वना दिन उनको घर गए। कुराकानीमा प्रशिक्षकले भने ( म सिद्धार्थकी आमाको छेउमा बसिरहेको थिएँ। आमाले अझै पनि छोरा नभएको कुरा विश्वास गर्न सकेकी छैनन् । उनलाई लाग्दैछ कि ऊ पछाडिबाट आउछ र आमा भन्छ ।
आमा मेरो लागि यस्तो गरीदिनुस् पक्कै भन्छ ।ूसिद्धार्थ आमासंग निकै नजिक थिए । उनीहरु एक दिनमा धेरै पटक कुराकानी गर्थे । उनी आमासंग कुरा गरेर मात्र सुत्थे भने विहान उठ्नासाथ उनको दैनिकी आमाबाटै सुरु हुन्थ्यो । आमा अब म सुत्न जाँदैछु भन्थ्यो अनि बिहानै मेरो फोन उठाउनुहोस् भन्दै कुरा गथ्र्यो ।
सिद्धार्थलाई आमाको धेरै चि’न्ता थियो। किनभने सिद्धार्थ आफ्नी आमाको सबैभन्दा नजिक थिए। ुूशहनाज पनि त्यहाँ बसिरहेकी छिन्। शहनाज सिद्धार्थको घरमा छन्। उनी पनि असहाय थिइन्। उनी धेरै बोल्दै थिइनन्। एक्लै बसिरहेकी थिइन् । शहनाज बाहेक, त्यहाँ बलिउडका धेरै कलाकार पुगेका छन् ।
यो शहनाज गिल को लागी एक दुखद समय हो। उनी सिद्धार्थ शुक्लाको धेरै नजिक थिइन्। उनीहरु बिग बोस १३ मा भेटिएका थिए। शो मा उनीहरुको मित्रता यति गहिरो भयो कि प्रशंसकहरु उनीहरुलाई सिडनाज भन्न थाले। सिद्धार्थ मुम्बईमा शहनाजको समर्थन थियो। शहनाज गिल पन्जाबकी हुन्।
सिद्धार्थ मुम्बईमा उनको समर्थन प्रणाली थियो। उनीहरु दुबै सँगै ह्याग आउट गर्ने गर्दथे। पार्टीहरु गर्थे । शहनाजले सिद्धार्थको घरमा आफ्नो अन्तिम जन्मदिन मनाएकी थिइन्। दुबैको ब’न्धन बलियो थियो। शहनाज र सिद्धार्थ केहि दिन पहिले बिग बोस ओटीटी मा सँगै देखिएका थिए। दुवै एक संगीत एकलमा काम गर्न जाँदै थिए। तर अब सिद्धार्थको प्रस्थान को कारण, यो परियोजना अधूरो रह्यो।